MX -21: MX Linux beta 1 ဗားရှင်းရနိုင်သည် - Flor Silvestre / Wildflower | Linux မှ
MX -21: MX Linux beta 1 ဗားရှင်းရနိုင်သည် - Flor Silvestre / Wildflower
Linux Post Install လုပ်ပါ | 01/08/2021 06:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 01/08/2021 13:22 | ဖြန့်ဝေ, NOTICIAS
လွန်ခဲ့သော ၄ ရက်ကတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း အဖြစ်လူသိများ "MX" အောက်ပါအခြေအနေများတွင် beta ဗားရှင်း၌ပထမဆုံးဗားရှင်းရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သာယာသောနှင့်စောင့်မျှော်ခဲ့ရသောသတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးခဲ့သည် Distro MX Linux လွတ်မြောက်ရန်၊ ဆိုလိုသည်မှာ "MX-21".
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကွယ်မှကြီးမားသောအသင်းကိုကျေးဇူးတင်ပြီးအရာအားလုံးဖြစ်နိုင်သည် "MX"မင်းကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အရာ ISO အသစ် ပေါ်အခြေခံကာ "Debian 11 Bullseye"၊ အဖွဲ့ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ် Debian GNU / Linux ဒီအတွက်ကြေငြာပြီးပြီ 14 / 08 / 2021 release date လည်းအတူတူပါပဲ။
1 Debian 11 Bullseye အကြောင်း
2.1 MX-21 အကြောင်းသတင်း
2.2.1 MX 19.4 တွင် VirtualBox ကိုအသုံးပြုခြင်း
2.2.2 MX-21 ISO boot
2.2.3 Interface နှင့် Applications များကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ
Debian 11 Bullseye အကြောင်း
အဲဒီအချက်ကိုမှတ်သားကြပါစို့ ဝီကီအပေါ်တရားဝင်သတင်းအချက်အလက် de la Debian အဖွဲ့အစည်းဤနှစ်သည်နှစ်ဖြစ်သည် "Debian 11 Bullseye"ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေဟာစာတမ်းရဲ့အဓိကမှတ်တိုင်တွေပါ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဖြန့်ချိ ကြောင်းဗားရှင်း:
ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပိုပြီးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် "Debian 11 Bullseye" y "MX Linux" ငါတို့ရဲ့ link အချို့ကိုအောက်ကချက်ချင်းထွက်သွားလိမ့်မယ် ဆက်စပ်ယခင်ပို့စ်များ
အတိုင်း တရားဝင်ကြေငြာချက် de la ဖြန့်ဝေမှု“ MX Linux” ၏ဝဘ် ISO အသစ် "MX-21" beta 1 state တွင်အခြေခံတည်ဆောက်ထားသည် "Debian 11 Bullseye"အောက်ပါသတင်းနှင့်အတူလာလိမ့်မည်။
ISO (၂) ခုစမ်းသပ်မှုနှစ်ခု၊ တစ်ခု Kernel 32 နှင့်အတူ 5.10 Bit နှင့်တဦး Kernel 64 နှင့်အတူ 5.10 Bit.
အသစ်နှင့်အဆင့်မြှင့်ထားသော application များ။
lvm ပမာဏရှိနေလျှင် lvm အတွက်အထောက်အပံ့အပါအ ၀ င် installer partition ရွေးချယ်ရေးဧရိယာအသစ်။
UEFI Live System Boot Menus အသစ်။ ယခင် console menus များကိုသုံးမည့် boot menu နှင့် submenus များမှ (ဥပမာဇွဲ၊ အခြား) ကဲ့သို့ boot boot options များကိုရွေးချယ်နိုင်စေရန်။
၎င်းသည် Xfce Desktop Environment ကို၎င်း၏ဗားရှင်း 4.16 တွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
၎င်းသည်အုပ်ချုပ်မှုတာဝန်များအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်သုံးစွဲသူစကားဝှက် (sudo) ကိုအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည်။ MX Tweak / Other တွင်ဤအရာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အထူးသဖြင့် default panel plugins အသစ်များပါ ၀ င်သော panel တွင်များစွာသောသေးငယ်သည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ၎င်း၏ developer များကထပ်ပြောသည် ISO အသစ်၏ပထမဆုံး beta အတွက်အောက်ပါ
"ဤ beta 1 ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ UEFI system boot menus အသစ်များနှင့် installer ကိုစမ်းသပ်ရန်အထူးစိတ်ဝင်စားသည်။ Virtualbox တွင်စမ်းသပ်ခြင်းကိုကြိုဆိုပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစိတ်အပိုင်းအများစုအတွက်အစစ်အမှန် hardware များပေါ်တွင်အစွန်းအထင်းများကိုရှာဖွေနေသည်။"
၎င်းသည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးဖြန့်ချိသောအခါ၎င်းသည်အခြေခံဗားရှင်းများပါ ၀ င်မည်ဟုကတိပြုသည် KDE / Plasma, AHS / Xfce y Fluxbox.
ဒါတွေကတော့သူနဲ့ဘယ်လိုတူလဲဆိုတဲ့ screenshots အချို့ပါ "MX-21" beta 1 အခြေအနေကိုအခြေခံသည် "Debian 11 Bullseye":
MX 19.4 တွင် VirtualBox ကိုအသုံးပြုခြင်း
MX-21 ISO boot
Interface နှင့် Applications များကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ
MX Installer ကို install လုပ်ပါ
LibreOffice ရုံး Suite
Mozilla Firefox အင်တာနက်ဘရောက်ဇာ
MX Tools ကဏ္
မှတ်ချက်: Virtual Machine (VM) ကို သုံး၍ ဖန်တီးထားသည် VirtualBox တစ် ဦး ကျော် Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linuxအပေါ်အခြေခံပြီးသော MX Linux ကို 19 (Debian 10), ငါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ပါတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်».
"MX ကမင်းပါna Distro GNU / Linux သည် antiX နှင့် MX Linux အသိုင်းအဝိုင်းများအကြားပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကြော့ရှင်း။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများကိုပေါင်းစပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Operating Systems ၏မိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်ကိရိယာများသည်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။ Live USB နှင့် antiX မှထုတ်ယူလိုက်သောလျှပ်တစ်ပြက်ကိရိယာများသည်အထင်ကြီးလောက်သောသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်မြှင့်စွမ်းရည်များထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ဗီဒီယိုများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အလွန်ဖော်ရွေသောဖိုရမ်များမှတဆင့်များပြားစွာသောအထောက်အပံ့များရှိသည်။" MX Linux Web
တိုတိုပြောရရင် "MX-21" ၎င်းသည်ဆက်ခံရန်ထိုက်တန်သောဆက်ခံသူဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် MX Linux ဖြန့်ချိရေး Sagaယနေ့တိုင်ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိပါသည် DistroWatch တွင်“ အဆင့်အမြင့်ဆုံး GNU / Linux Distro" ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုသူများသည်အသိအမှတ်ပြုထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စနှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ၌၎င်းကိုငါစဉ်းစားသောကြောင့်၎င်းကိုအလွန်အမင်းအကြံပြုလိုပါသည် GNU / Linux Distro ၎င်းသည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်တန်ဖိုးနှင့်အကျိုးရှိမှုကိုများစွာယူဆောင်ပေးနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » MX -21: MX Linux beta 1 ဗားရှင်းရနိုင်သည် - Flor Silvestre / Wildflower
Linux ကို အသုံးပြု၍ တက်ကြွသော Steam အသုံးပြုသူများအချိုးသည် ၁%သို့ရောက်ရှိသည်။
Apache Cassandra 4.0 သည်အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်အခြားအရာများပါလာသည်